टोपबहादुरको कटाक्षः ‘प्रचण्ड र माधव नेपाल कांग्रेसको पुच्छर बने’
काठमाडौं । नेकपा एमालेका स्थायी कमिटी सदस्य टोपबहादुर रायमाझीले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल नेपाली कांग्रेसको पुच्छर बनेको आरोप लगाएका छन् ।
'व्यक्ति स्वार्थमा पार्टी एकतालाई पद प्रतिष्ठाका लागि उपयोग गरे । फुटाउने कुचेष्टा गरे । ओलीको नेतृत्वमा एकता जोगाउन पहल गर्‍यौं । तर उहाँहरु नेकपाबाट भाग्नुभयो । आफ्नो आफ्नो कोठातिर लाग्नुभयो । नयाँ उद्देश्य राखेर गएको होइन । गलत गर्नुभयो,' उनले भने ।
'प्रतिपक्षी नेता बोकेर पुच्छर बनेर हिँडे । काम गर्न नदिने, संसद विघटन गर्दा प्रतिगमन भन्ने?' उनले प्रश्न गरे, 'संसद पुनर्स्थापनापछि ओली नै आउँछ भनेर देशी विदेशी प्रतिक्रियावादी लागेर जनादेशको विरुद्धमा परमादेश आयो । पुरै डिजाइनमा देशपारिमात्र होइन समुद्र पार गरेर रेटेर ह्विप नलाग्ने भनियो ।'
रायमाझीले प्रचण्ड र माधवले गद्दारी गरेको आरोप लगाए । 'उहाँहरुले ठूलो भूल र कमजोरी गर्नुभएको छ,' उनले भने ।
कम्युनिष्ट आन्दोलनप्रति गद्दारी गरेर, कांग्रेसको पुच्छर बनेर सरकार बनाए पनि अझै आफ्नै बलमा उभिन नसकेको उनको टिप्पणी थियो । 'यति हुँदाहुँदै पनि सरकार बनाउनुभएको छ, कांग्रेसको पुच्छर बन्नुभएको छ । कम्युनिस्टहरु कांग्रेसको पुच्छर हो ? गल्ती गर्नुभयो । अहिले त गर्नुभयो भोलि पनि कांग्रेसको नेतृत्वमा चुनावमा गठबन्धन बनाउने रे । एमालेसँग एक्लै चुनाव लड्ने हिम्मत छैन । अब कांग्रेसको चुनावी घोषणापत्रमा महागठबन्धन गर्नेले विकास गर्छ ?' उनले प्रश्न गरे ।
अहिले सम्पूर्ण पार्टी एकातिर एमाले एकातिर भएको उल्लेख गर्दै रायमाझीले दुनियाँको कुनै पनि शक्तिले एमालेलाई पराजित गर्ननसक्ने दाबी गरे । 'हामी एकजुट हुनुपर्छ । माओवादी पृष्ठभूमिको हामी ओलीकै नेतृत्वमा समृद्ध हुन्छ भनेर जोडिएका छौं । साथीहरु परपर जानुहुन्छ । भ्रममा नपरौं । जोडिऔ । अहिलेको आवश्यकता ओलीको नेतृत्वमा देश बनाउने हो,' उनले भने ।
राप्रपाको महाधिवेशन ११-१३ मंसिरमा, यस्तो छ कार्यतालिका
भीम रावलको राजीनामा स्वीकृत
यसरी चयन हुनेछन् एमालेका महाधिवेशन प्रतिनिधि
काँग्रेस महाधिवेशनको संशोधित कार्यतालिका सार्वजनिक, कुन-कहिले ?
प्रधानसेनापति भारत जाने, मन्त्रिपरिषद्ले दियो स्वीकृती